कसले , के गर्‍यो सोनिका रोकायालाई ? रुदैँ आइन् लाइभमा। - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार कसले , के गर्‍यो सोनिका रोकायालाई ? रुदैँ आइन् लाइभमा।
कसले , के गर्‍यो सोनिका रोकायालाई ? रुदैँ आइन् लाइभमा।
काठमाडौं := चर्चित मोडल तथा विवादित युट्युबर सोनिका रोकाया विभिन्न ह र्क त गर्दै चर्चा र आलोचनाको घेराबन्दीमा परिरहन्छिन । यस्तै उनी फेरि रुदै आफ्नो फेसबुक लाइभमा आएकी छन् । युट्युबको माध्यम हुँदै युवापुस्ता माझमा निकै लोकप्रिय बनेकी उनी यो पटक लाईभमा निकै आ क्रो शि त भएकी देखिन्छ । उनको आ क्रो श सबै प्रती भन्दा पनि एक ब्यक्ति प्रती लक्षित देखिन्छ।
उनले राम गौतमको नाम लिदै ज था भा वी अ श्ली ल शब्दहरू बारम्बार प्रयोग गरेकी छन् । तर, राम को हो ? उनले के गर्यो ? किन यसरी आ क्रो शि त भए ? भन्ने बारे भने लाईभमा खुलेको छैन।तर, उनको लाईभमा देखिएको आ क्रो श बाट बुझ्न सकिन्छ उक्त ब्यक्तिबाट रोकायालाई निकै ट च र दिइएको छ।
एक्कासी लाइभमा आएर यस्ता कुराहरु भन्नु या यसरी प्रस्तुत हुनु उनि आफैमा लज्जाको कुरा हो। उनले राम गौतमको क र्तु त बाहिर ल्याउछु भन्दै गो लि हान्छु सम्म भनेकी छन् । आफ्नो आमाले फेसबुक लाइभ रोक्न खोज्दा आमालाई नै गा ली गरेको लाइभमा देख्न सकिन्छ । पैसा ठुलो होइन मानवता ठुलो हो, म पागल हो, मेरो कारणले एउटा मान्छे म र्दै छ भन्दै विभिन्न कुरा गर्दै लाइभ आएकी हुन् ।
हेर्नुहाेस साेनिका राेकायाकाे याे भिडियो :
अघिल्लो लेख २६ औं विश्व आदिवासी दिवस मलेसियामा भब्य मनाइयो/महासंघ भित्रको रिक्त पदपूर्ति।
पछिल्लो लेख दुवै मृ’गौला फेल भएर उपचाररत नेपाली युवाको इराकमा मृत्यु।
सुरु भयो राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण (गणना)
नेपालले लगायो दक्षिण अफ्रिका र हङकङ सहित ९ देशबाट आउने यात्रुलाई प्रवेशमा रोक।